Sarkaal Sare Oo Lagu Dhaawacay Weerar Gedo Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Sare Oo Lagu Dhaawacay Weerar Gedo Ka Dhacay.
May 19, 2017 4:49 am Views: 54
Wararka ka imaanaya gobalka Gedo ee Konfur Galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah gobalkaasi lagu weeraray sarkaal ka tirsan dowlada Ridada federaalka iyo maleeshiyaat la socday.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sarkaalkan ku weeraray duleedka degmada Buurdhuubo oo ka mid ah goobaha Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka dowlada ay kaga suganyihiin gobalka Gedo.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in weerarkaasi qorsheysan lagu dhaawacay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka dowlada Ridada ugu magacaaban degmada Buurdhoobo kaasi oo magaciisa lagu soo koobay Mado-jiis.
Sidoo kale weerarkan waxaa lagu dilay mid ka mid ah ilaalada gaarka ah ee sarkaalka la dhaawacay’iyadoona ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gacanta ay ku dhigeen labo qori oo ay kala lahaayeen sarkaalka la dhaawacay iyo askariga lagu dilay weerarkaasi.
Sarkaalka lagu dhaawacay weerarkaan ayaa ah sarkaal si aad ah u dhibay shacabka ku dhaqan degmada Buurdhuubo ee gobalka Gedo.